Meksika-Etazonia: Lahatsary Avy Amin’ny Andaniny sy Ankilan’ny Sisintany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Novambra 2017 7:26 GMT
(Marihina fa tamin'ny 7 Novambra 2008 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Fanadihadiana momba ny fiainana misy eo amin'ny andaniny sy ankilan'ny sisintany ny 389 Miles. Ao amin'ny lahatsary fampidirana maharitra 4 minitra, manasa antsika hijery ny horonantsary nataony momba ireo miatrika ny tany efitra rehefa miezaka ny hiampita ny sisintany ny mpanatontosa Luis Carlos Romero-Davis, sy momba ireo mitady iretsy voalohany mba hanampy azy ireo kanefa mbola misy ihany koa ny hafa izay miezaka hanosi-bohontanana ny mpifindra monina tsy ara-dalàna. Ity fanadihadiana ity ihany koa dia ahitana ny antsafa niarahana tamin'ny mpampita (mpitsoa-ponenana) iray nanazava ny fanondranana olona an-tsokosoko ao amin'ity faritra eto amin'izao tontolo izao ity.
Manazava ny antony maha zava-dehibe ny fifehezana ny fandotoan-drivotra, ahitana ireo ohatra fandotoana misy amin'ny tany, ny rano ary ny rivotra ny Contaminacion 202, vondrona tanora avy any Tijuana, Meksika.
Manaraka ny asa atao ao amin'ny Pacific Rim Park ao amin'ny faritanin'i Baja California, Meksika ny lahatsary fahatelo mitondra ny lohateny hoe “Entre Corazón y Mar” (eo anelanelan'ny fo sy ny ranomasina), izay ahitana Meksikana, Amerikana, Rosiana sy Shinoa nivondrona mba hanangana tsangambaton'ny fimaroana ara-kolontsaina.
Horonantsary maro hafa no hita ao amin'ny tranonkalan'ny Frontera Filmmakers, ao anatin'izany ny sarimiaina, ny andrana fandaharana amin'ny fahitalavitra ary ny “fitsangatsanganana ara-kolontsaina” eo amin'ny fiainan'ireo izay miaina eo andaniny sy ankilan'ny sisintanin'ny tontolo roa.